China 5T flake ice umshini ifektri kanye nabaphakeli | Izinhlelo ze-Herbin Ice
Umshini weqhwa we-5T / wosuku wokwenza amathani ama-5 ama-ice flakes nsuku zonke, kungakapheli amahora angama-24.
Siphakela umshini weqhwa we-5T / ngosuku. Ikhwalithi ephezulu newaranti yonyaka emi-2. Sizinikela emishinini yeqhwa kusukela ngo-2009, futhi imishini yethu ihlanganisa iningi lezimakethe zaseYurophu nezaseMelika. Silindele ukukuhlinzeka ngobuchwepheshe bethu beqhwa obuzinzile futhi obonga amandla.
1.Iqhwa elenziwe ngomshini wethu weqhwa we-5T / day flake.
Ama-ice flakes enziwe yimishini yethu yeqhwa le-flake afriziwe ngokusebenza okuhle kakhulu kokupholisa. Ama-ice flakes aminyene futhi omile.
Cishe amathani ama-5 amaqhwa asezingeni eliphakeme kangaka angenziwa nsuku zonke kungakapheli amahora angama-24, nokuthi amandla eqhwa akhiqiza nsuku zonke asuselwa kuzinga lokushisa elingu-30C, izinga lokushisa lamanzi angama-20C.
Ububanzi beqhwa buphakathi kuka-1.5-2.3mm. Futhi ukujiya kweqhwa kuyashintsha.
Ama-ice flakes anjena asetshenziselwa ukubamba izinhlanzi ezibandayo, ukugcina ukudla kuhlanzekile, ukucutshungulwa kokudla, ukupholisa kokhonkolo, ebhodini lokudoba izinhlanzi, ukusetshenziswa kwamakhemikhali nokunye.
Zenziwe ngemishini yeqhwa esindisa amandla ye-flake ice, futhi ukusetshenziswa kwamandla okwenza wonke ithani elilodwa lama-flakes e-ice kungama-75KWH kuphela.
2. Imininingwane kwe 5T / umshini weqhwa we-flake wosuku.
Umthamo wethu we-5T / day we-flake ice machine usekelwe ekushiseni kwe-30C kuma-20C kanye nokushisa kwamanzi kwe-20C. Ngaleso simo esivamile sokusebenza, singenza cishe amathani ama-5 ama-ice flakes nsuku zonke, kungakapheli amahora angama-24.
Inama-Silver alloy evaporator, ane-conductivity enhle kakhulu yokushisa. Ukushintshanisa ukushisa phakathi kwamanzi nefriji kungenziwa kahle kakhulu. Ngalesi sizathu, lo mshini weqhwa we-5T / day flake udla kuphela u-375KWH kagesi ngokwenza amathani ama-5 ama-ice flakes. Omunye umshini weqhwa we-Chinese 5T / day flake uqeda okungenani u-525 KWH kagesi ngokwenza amathani ama-5 amaqhwa eqhwa. Umehluko wokusetshenziswa kukagesi nsuku zonke ngu-150KWH.
Eminyakeni eyishumi, umehluko uzoba ngu-547500 KWH kagesi. Sibala ngokusebenzisa i-150x365x10 = 547500.
Khetha umshini wami weqhwa we-5T / day, uzokhokha imali encane kakhulu ku-bill kagesi ngokonga u-547500 KWH kagesi eminyakeni eyishumi.
Okungu-80% wezingxenye kumshini weqhwa we-5T / day we-flake yi-brand eyaziwa emhlabeni jikelele. Kuma-compressors, sikhetha phakathi kweBitzer, GEA Bock, Frascold, Refcomp, njalonjalo. Okwemikhumbi yengcindezi, njengokuhlukanisa uwoyela, isamukeli soketshezi nokunye, sikhetha i-Emerson noma i-O & F, okuyizinto ezithandwa kakhulu futhi ezisetshenziswa kakhulu ezinhlelweni eziseqophelweni eliphezulu zekhwalithi. Okwamanje, ama-valve e-Danfoss, abalandeli be-Ziehl-Abegg, izingxenye zikagesi zeSchneider, njalonjalo ziyasetshenziswa emishinini yethu ye-5T / day flake ice.
Nazi ezinye izithombe zezinto ezithile nemininingwane kumshini wethu weqhwa we-5T / day flake ice.
3. Ipharamitha kwe 5T / umshini weqhwa we-flake wosuku.
1 Amapharamitha Okucacisiwe
2 Izinga lokushisa elisezingeni elifanele 30 ℃
3 Ukushisa kwamanzi okujwayelekile 20 ℃
4 Umthombo wamanzi Amanzi amasha
5 Ukunikezwa kwamandla kagesi 400V / 4P / 50Hz
6 Isimo sokusebenza Inomoya omuhle
7 Imodeli Ingxenye #: HBF5T-R4W
8 Isiqandisi R404a
9 Umthamo wokukhiqiza weqhwa nsuku zonke Amathani ama-5 amaqhwa eqhwa kungakapheli amahora angama-24
10 Umthamo wesiqandisi 25.3KW
11 Ukushisa okuhwamukayo Kususwe 18 ℃ - Kususwe 20 20
12 Ukushisa kweqhwa kwe-Flake Ngezansi -5 ℃
13 Flake ice ukujiya 1.8-2.2mm
14 Ukusetshenziswa kwamandla kokwenza iqhwa 75KWH ngokwenza ithani eli-1 lamaqhwa eqhwa
15 Umsindo 78dBA ngaphakathi kwamamitha amabili
16 Amandla wokugijima womshini ophelele I-15.625KW Ukonga amandla !!!
18 Iphampu yombhoshongo wamanzi ne-fan motor 1.5 + 0.55 = 2.05KW
19 Umthamo wokushintshanisa ukushisa kwamanzi 100KW
20 Nciphisa umsiki weqhwa ku-evaporator 0.55KW
21 Iphampu yokusakazwa kwamanzi ku-evaporator I-0.12KW
22 Uhlelo lokulawula Uhlelo lokulawula i-PLC
23 Ice flake ukuminyana 900 ~ 950kg / m3
24 Isisindo somshini weqhwa we-flake Ama-1500kgs
25 Ubukhulu bomshini weqhwa we-flake I-LxWxH = 2300x1900x1800mm
4. Umdwebo we-5T / day flake ice plant ejwayelekile.
Amakhasimende amaningi angathanda ukukhetha umshini weqhwa we-5T / day osebenza ngekamelo elilodwa le-3T ndawonye. Lokho futhi kuyindinganiso yethu yesitshalo seqhwa se-5T / day flake ice.
Umshini weqhwa we-5T / day flake utholakala ngaphezu kwegumbi leqhwa le-3T.
Igumbi leqhwa lakhiwe ngamapaneli afakwe ukushisa ngosayizi we-100mm, futhi ama-ice flakes angagcinwa ngaphakathi ngaphandle kokuncibilika isikhathi eside. Amaqhwa eqhwa awela ngokuzenzekelayo egumbini leqhwa.
Igumbi leqhwa le-3T lingagcina amathani ama-ice flakes angamathani ama-3, futhi lokho kwanele ukugcina wonke ama-ice flakes enziwe ngesikhathi sasebusuku ngomshini weqhwa we-5T / day flake ice.
Kulowo mdwebo, ungabona umbhoshongo wokupholisa amanzi eceleni komshini weqhwa. Isetshenziselwa ukukhulula ukushisa kube kuma kusuka ohlelweni lweqhwa. Umbhoshongo wokupholisa amanzi uphakanyiswa ukuthi ubekwe endaweni evulekile, njengaphezulu kwesakhiwo, ngaphandle kwesakhiwo nokunye. Amanzi apholile aklanyelwe kakhulu ukuthi asebenze ezindaweni ezishisayo.
Usayizi wegumbi leqhwa ungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ngaphandle kwe-condenser yokupholisa amanzi, futhi singahlomisa umshini ngamafeni okupholisa umoya + abalandeli bokupholisa umoya. Futhi sizoklama uhlelo ngokuya ngezinga lokushisa eliphakeme neliphansi kakhulu lomsebenzisi lendawo.
5.Ikusasa lomkhiqizo nokusetshenziswa komshini weqhwa we-5T / day flake ice.
Ama-flakes e-ice owomile futhi afriziwe ngokusebenza okuphelele kokupholisa. Ama-ice flakes angasetshenziselwa ukuqandisa ukudla kwasolwandle, ukugcina ukudla kukusha, ukucubungula ukudla, ukupholisa ukhonkolo, ebhodini lokudoba izinhlanzi, ukusetshenziswa kwamakhemikhali nokunye.
6. Ukulethwa, ukuthunyelwa, insizakalo kanye newaranti yomshini weqhwa we-5T / day flake.
Isitsha esisodwa esingamamitha angama-20 sanele ngaphezu kwesinye se-5T / day flake ice plant ephelele, kufaka phakathi umshini weqhwa we-5T / day flake, igumbi leqhwa, ifreyimu yensimbi yokuxhasa umshini weqhwa nendodana.
Sinikeza insizakalo yokubonisana nge-inthanethi mahhala empilweni yomshini isikhathi eside. Sinikeza izingxenye mahhala nge-DHL uma izingxenye zomshini zinenkinga yekhwalithi ngaphakathi kwewaranti.
Iwaranti ye-flake ice evaporator yiminyaka engama-20, siyathembisa ukuthi i-evaporator ayinayo igesi evuzayo, ayinakho okungalungile phakathi neminyaka engama-20.
Iminyaka emi-3 ingeyewaranti yamaMotors, amaphampu, amabhere, abalandeli, izinto zikagesi nezinye izingxenye ezihambayo.
Iminyaka eyi-15 iyiwaranti yemikhumbi yengcindezi, i-condenser, i-compressor, ama-valve njalonjalo.
7. Imibuzo evame ukubuzwa mayelana ne-5T / day flake ice machine.
Q: Ingakanani isitshalo seqhwa se-5T / day flake ice?
A: Intengo ye-5T / day flake ice plant iphakathi kwe-USD 13500 ne-USD 20000.
Amanani ancike kuhlu lwezinto zomshini nosayizi wegumbi leqhwa. Izintengo zisuselwa ku-FOB SHENZHEN USD, futhi azibandakanyi izindleko zezimpahla. Ikhasimende kufanele likhokhele imithwalo yodwa.
Q: Uyini umehluko phakathi komshini wethu we-flake ice nomunye umshini weqhwa waseChina?
A: Umehluko omkhulu ubuchwepheshe bethu bokonga amandla.
Sisebenzisa i-Chromed sliver alloy ukwenza i-evaporator ye-conductivity enhle kakhulu nephumelelayo.
Esimweni esifanayo sokusebenza, umshini wami weqhwa we-5T / day usebenzisa u-375KWH kagesi nsuku zonke, kuyilapho eminye imishini yamaqhwa amaShayina idla okungenani ama-525KWH nsuku zonke.
Nsuku zonke, umehluko ngu-150KWH kagesi.
Eminyakeni eyishumi, umehluko ngu-547,500 KWH kagesi.
Eminyakeni engama-20, umehluko u-1,095,000 KWH kagesi.
Izindleko zakho ezinkulu kakhulu zokwenza iqhwa ugesi. Ukhiye webhizinisi leqhwa eliphumelelayo futhi elinenzuzo ubuchwepheshe bemishini bonge amandla.
Ngobuchwepheshe bami bokonga amandla, ungakhulisa inzuzo yakho yeqhwa ngokukhokhela imali encane kagesi.
Ngobuchwepheshe bami bokonga amandla, ungathengisa iqhwa ngentengo ephansi kunabancintisana nabo, futhi maduze ungakhipha izimbangi zakho ngaphandle kwemakethe.
Ngaphezu kwalokho, sinedivayisi eyengeziwe yokukusiza ukonga amandla.
Ake sikubize ngokonga amandla. Amagagasi kagesi angenamsebenzi / angasebenzi angahlungwa ngesilondolozi samandla, ngakho-ke, anganciphisa ukusetshenziswa kohlelo lonke ngo-5% -8%.
Intengo yesilondolozi samandla iqala kusuka ku-USD 3000 / isethi, futhi kuya ngamandla aphelele afakiwe wohlelo.
I-USD 3000 yintengo yesilondolozi samandla kagesi se-5T / day flake ice plant.
10T / ngosuku flake ice umshini
15T / ngosuku flake ice umshini
20T / ngosuku flake ice umshini
25T / ngosuku flake ice umshini
30T / ngosuku flake ice umshini
Imishini yeqhwa emikhulu emikhulu
Langaphambilini 0.6T cube umshini ice
Olandelayo: 30T flake ice umshini